Dr. Tint Swe's Writings: Coronavirus Medicines ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကုသရေး စမ်းသပ်နေတဲ့ဆေး
Coronavirus Medicines ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကုသရေး စမ်းသပ်နေတဲ့ဆေး
မင်္ဂလာပါ ဆရာ ဆရာပြောတဲ့ covid-19 အတွက်သောက်ဆေး Azithromycin နဲ့ Hydrochloquine ကို တနေ့ဘယ်နှစ်ကြိမ်သောက်သင့်ပါသလဲဆရာ ဗဟုသုတအနေနဲ့သိချင်လို့ပါဆရာ
အထူးကူးစက်လူနာဆောင်မှာ တင်ထားပါသလား။ စမ်းသပ် ကုသပေးနေတဲ့ ဆရာဝန်ညွှန်တဲ့အတိုင်းသာ သောက်သင့်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကုသရေး စမ်းသပ်နေတဲ့ဆေး ၁၀ ခုအကြောင်း ရေးတင်ထားတယ်။ မနေ့က သတင်းအရ ဆေးအမျိုး ၇၀ လောက်ရှိတယ်။ မေးခွန်းထဲကဆေး ၂ မျိုးလည်းပါတယ်။
1. This combination of two antiviral drugs, lopinavir and ritonavir, is used to combat HIV. It’s widely available, and several clinical trials around the world are underway.
2. Remdesivir was developed by Gilead Sciences to fight Ebola but failed to prove effective.
3. Chloroquine (hydroxychloroquine/Plaquenil),adrug used to treat malaria and arthritis,
4. Favilavir, the first approved coronavirus drug in China
5. Airway Therapeutics is exploring its novel human recombinant protein named AT-100 (rhSP-D) asatreatment for coronavirus.
6. Tiziana Life Sciences is developing its monoclonal antibody named TZLS-501 for the treatment of COVID-19. TZLS-501 isahuman anti-interleukin-6 receptor (IL-6R), which helps in preventing lung damage and elevated levels of IL-6.
7. OyaGen’s OYA1 has shown strong antiviral efficacy against coronavirus in laboratory essays. It was found to be more effective than chlorpromazine HCl in inhibiting SARS-CoV-2 from replicating in cell culture.
8. BeyondSpring’s BPI-002 isasmall molecule agent indicated for treating various infections including COVID-19.
9. I-Mab Biopharma is developed TJM2,aneutralising antibody, asatreatment for cytokine storm in patients suffering fromasevere case of coronavirus infection. The drug targets the human granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF), which is responsible for acute and chronic inflammation.
10. Losartan, hypertension drug reduces blood pressure by preventingahormone called angiotensin from binding to receptors on blood vessels, allowing them to stay relaxed.
အခုစာရေးနေတဲ့အချိန်အထိ အမေရိကန် CDC ကနေ covid-19 အတွက် အတည်ပြုချက်ပေးထားတဲ့ဆေး မရှိသေး။
ရောဂါပိုးကရောဂါအသစ်။ တကမ္ဘာလုံးမှာ ကုသဆေးနဲ့ ကာကွယ်ဆေးကို စနစ်တကျလုပ်နေကြတယ်။
ဆေးတွေ ကာကွယ်ဆေးတွေကို ဒို့စ် ခေါ် တနေ့ ဆေးအလေးလျိန်နဲ့ ဘယ်နှစ်နာရီခြားပေးမလဲ၊ ကို့စ် ခေါ် ဘယ်လောက် ကြာပေးမလဲ စမ်းသပ်ကြရတယ်။ ဓါတ်ခွဲခန်းထဲ စမ်းတယ်။ သက်ရှိအကောင်တွေ စမ်းမယ်။ နောက် လူ ဗော်လန်တီယာ ခေါ် စမ်းသပ်ခံဘို့ သဘောတူသူတွေကို စမ်းမယ်။ စမ်းသပ်မှုတွေကို ဆန်းစစ်ပြီး ကောက်ချက်ချရတယ်။ FDA ကို တင်ပြရတယ်။ မှန်ရင် အတည်ပြုချက် ပေးလိုက်ပြီး ဈေးကွက်ထဲ ရောက်လာမယ်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကာကွယ်ဆေးသတင်းနဲ့ အနည်းဆုံး ဘလော့ရတာ ၂ ယောက်။ လူတွေကိုစစမ်းတော့မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကို အင်တာနက်ပေါ်က ကောက်ယူလာတဲ့ ကာကွယ်ဆေး လက်မောင်းမှာထိုးပေးနေတဲ့ပုံနဲ့ ပို့စ်တွေ လာပြတယ်။ လူတွေကို ထိုးပေနပါပြီတဲ့။ အဲတာ မဟုတ်သေးဘူးပြောတာ မရ။ ခံငြင်းလို့ ဘလော့လိုက်တယ်။ ကာကွယ်ဆေး တနှစ်အတွင်း မပေါ်နိုင်သေးပါ။
ကုသဆေး အခုထိ အတည်ပြုချက်ရတာ မရှိသေး။ လူဘယ်နှစ်ယောက် ဘလော့ရမယ် မသိသေး။
၂၄-၃-၂၀၂၀Coronavirus Medicines ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကုသရေး စမ်းသပ်နေတဲ့ဆေး